Soo ogow waxa lagu arko Xeebta Oyambre ee Cantabria | Wararka Safarka
In bulshada Cantabria waxaan ka heli karnaa xeebo qurux badan iyo muuqaalka dabiiciga ah, taasoo adkeyneysa in la doorto midkood. Xeebta Oyambre waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan waana sababta aan uga hadlayno iyo deegaanka ay ku taal. Waa xeeb ku taal magaalada Valdáliga iyo San Vicente de la Barquera.
La xeebta wanaagsan ee Oyambre waa meel runtii aad u qurux badan Qiyaas ahaan laba kilomitir oo dherer ah waa booqasho lama huraan ah haddii aan sii joogno San Vicente de la Barquera, oo ah meel dalxiis aad u qurux badan. Waxay ku taalaa gudaha Oyambre Dhirta Dabiiciga ah sidaas darteed sidoo kale waxay leedahay qiimo bey'adeed oo weyn.
1 Sida loo tago xeebta Oyambre
2 Beerta Dabiiciga ee Oyambre
3 Xeebta Oyambre
4 Meelaha u dhow
Sida loo tago xeebta Oyambre
Tani xeebta waxay ku taal meel si fudud loo heli karo maadaama ay u dhowdahay Santander. Haddii aad timaaddo Santander ka dib waxaad u qaadan kartaa A-7 Torrelavega ka dibna A-8 illaa San Vicente de la Barquera. Markii aan soo gaarnay degmadan waa inaan qaadnaa wadada CA-236 ee toos noo geynaysa Oyambre Natural Park iyo xeebtaan quruxda badan. Laga soo bilaabo Asturias waxaan sidoo kale qaadi karnaa wadada E-70 ka dibna A-8 ilaa San Vicente de la Barquera. Way fududahay in laga yimaado degmadan meela kala duwan maxaa yeelay wadada weyn ayaa dhex marta, sidaa darteed xeebta aad bay u fududahay.
Beerta Dabiiciga ee Oyambre
Xeebtaani waxay ku taal gudaheeda seeraha dabiiciga ah ee quruxda badan ee la ilaaliyo. Beertan waxaa loo qaybiyaa degmooyin kala duwan, Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga iyo Val de San Vicente. Meeshani waxay ahayd goob dabiici ah tan iyo 1988. Beertaan waxaa ku jira estuaries ee San Vicente estuary iyo Rabia estuary. Waa nidaam deegaan oo ku yaal aag xeebeed halkaas oo aan ka heli karno buudh, kaymo iyo estuaries leh dhir iyo xayawaan aan caadi ahayn. Halkan waxaad ka heli doontaa shimbiro badan oo biyo ah oo ku nasta aagga inta lagu guda jiro socdaalka.
Tani waa xeeb ciideed wanaagsan oo dahabi ah leh mowjado qaarkood. Waan ognahay in xeebaha ku yaal Cantabria ay yihiin kuwo furan oo u taagan mowjado leh, sidaa darteed waa ku habboon isboortiga sida dabaasha ama dabeylaha. Adeegyadeeda, waxaa ku yaal meel gawaarida la dhigto oo u dhow sidoo kale waa suurtagal in lagu tago gaadiidka dadweynaha, ugu yaraan xilliyada. Waxaa jira aag xero oo inta lagu jiro xilliga xilliga waxaad sidoo kale ka heli kartaa baararka xeebta agteeda si aad u iibsato wax qaboojiya. Iyada oo ay tahay xeeb caan ah oo aad u qurux badan, shaqadeedu waa celcelis. Xaalada qoysaska, had iyo jeer waa lagama maarmaan in laga taxadaro mowjadaha maxaa yeelay waxay kuxirantahay maalinta laguma talinayo inay caruurtu maydhaan. Xilliga waxaa jira adeegga badbaadinta nafta. Waa inaan tixgelin siino calamada lulaya maxaa yeelay waxay noo sheegaan hadaan maydhan karno iyo inay khatar noqon karto. Calanka cagaaran oo lagu maydhan karo ayaa laguu oggol yahay, iyadoo huruud ah waa inaad taxaddarro gaar ah qaadataa oo calanka guduudan waxaa fiican inaadan ku maydhin. Dhinaca kale, mamnuucyada qaarkood waa in lagu xisaabtamo, maxaa yeelay eeyaha looma oggola xeebta, sidoo kale kuma ciyaari kartid kubbado ama majarafado ama qashin ku tuuri kara.
Meelaha u dhow
Xeebtaan waa mid aad u qurux badan laakiin waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan aragno meelaha ku dhow dhow si aan u soo dalxiis tagno. Waxaa jira xeebo kale oo u dhow, sida kuwa Xeebta El Cabo ee San Vicente de la Barquera ilaa laba kiiloomitir ama xeebta Comillas ee Comillas ilaa afar kiiloomitir.
Magaaladaan yari waxay ahayd waxaa aasaasay qarnigii XNUMXaad Alfonso I wuxuuna ka dhisay qalcaddiisii ​​halkaan, oo magaaladan laga abaabuli doono. Waa meel aan soo marno haddii aan aadno Asturias oo sidoo kale ku taal Camino de Santiago oo caan ah, sidaas darteed waxay leedahay dalxiis aad iyo aad u badan. Mid ka mid ah waxyaabaha aan ku arki karno magaaladan waa Puente de la Maza qurux badan, buundo dhagax laga soo bilaabo qarnigii 32aad oo lagu dhisay buundada ugu da'da weyn alwaax. Waxay lahayd XNUMX qaansoley waxaana jira halyeey odhanaya hadaad hamiso oo aad ka gudubto buundada adoo neefta qabanaya, himiladu way rumoobi doontaa.
Meelaha kale ee aan ku arki karno magaaladan ayaa ah Sanbadka San Luis, oo ah qaab dhismeedka Gothic ee amarka Franciscan. Aaggii hore ee magaalada wuxuu na siinayaa tusaalooyin badan oo naqshadaha qadiimiga ah, sida Torre del Proboste, oo ah munaarad qarnigii XNUMX-aad ku dhegan darbigii hore. Qodobka kale ee ay xiiseyneyso ayaa ah kaniisada Santa María de los inngeles oo ku taal aaga sare ee magaalada. Kaniisad qurux badan oo la dhisay ilaa qarnigii XNUMXaad waxayna bixisaa tusaale weyn oo ah qaabka buuraha Gothic. Waxaa haboon in la arko labadaba gudaha iyo dibeddaba, maadaama sidoo kale lagu dhawaaqay Goob Xiiso Dhaqameed leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Xeebta Oyambre ee Cantabria